Soomaaliya: 30000 oo arday oo maanta imtixaanka u fadhiisanaya | Goojacade
Home Somalia Soomaaliya: 30000 oo arday oo maanta imtixaanka u fadhiisanaya
Soomaaliya: 30000 oo arday oo maanta imtixaanka u fadhiisanaya
Arday ka badan 30,000 oo ku sugan gobollada bartamaha iyo koofurta Soomaaliya ayaa saaka u fadhiisanaya imtixaanka fasalka afaraad ee dugsiga sare, kaddib markii ay hore dolwadda federaalka Soomaaliya u baajisay imtixaankaas oo socday muddo saddex maalmood ah, iyadoo sababta ku sheegtay inuu dibadda u baxay.
Imtixaanka ayaa socon doona muddo shan maalmood ah, iyadoo ay ardaydu maalin walba geli doonaan labo xiisadood. Ciidammo badan oo booliis ah ayaa la geeyay goobaha imtixaanka lagu qaadayo.
Wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ayaa sheegtay in tallaabooyin dheeraad ah la qaaday imtixaankuna yahay mid lagu kalsoonaan karo oo aysan sidii hore dhici doonin.
Dowladda ayaa 13-kii bishan baajisay imtixaanka iyadoo sheegtay in la dusiyay oo baraha bulshada lagu faafiyay. Arrintaas waxay sababtay in bannaanbaxyo ay dhigaan boqollaal arday ah, iyadoo maammul-goboleedyda qaarkoodna ay ka caroodeen sida ay dowladdu u maareysay arrintaas.
Ardayda ka banaan baxaysay ku celinta imtixaankoodii dhexda u marayay
”Waxaa nasiib darro ah in qof hunguri ka raadiyo imtixaanka, iyadoo weliba bil Ramadaan lagu jiro, waxaa nasiib darro ah in waaliddiintii qaar ay ka qayb galeen iibintii imtixaanaadkaas, waxaa nasiib darro ah in arday dedaalay uu soo dhinac fadhiisto mid isku hallaynaya inuu soo iibsaday imtixaankaas”, ayuu yiri wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre.
Sidoo kale wasiir Goodax ayaa sheegay in imtixaanka dib loo qaadayo maanta, iyadoo si ka duwan sidii hore loo wajihi doono, maalmaha uu socdana baraha bulshada la xiri doono.
Hase yeeshee, weriyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayaa sheegaya inaysan muuqan saansaan ah in la xiray baraha bulshada oo ay si caadi ah u shaqeynayaan, isla markaana ay muuqato in dowladdu ay siyaabo kale u maareysay oo lagu hubinayo inuusan imtixaanku dibadda u bixin.
Previous articleWalaac horleh oo soo food saaray Yuhuudda Jarmalka ku dhaqan
Next articleWiil Soomaali ah oo mar kale taariikh ka sameeyay Britain